Faroole “Waxaa jira nin hal milyan oo doolar ku bixiyay doorashada, si uu ku helo kursi..” (DHAGEYSO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faroole “Waxaa jira nin hal milyan oo doolar ku bixiyay doorashada, si uu ku helo kursi..” (DHAGEYSO)
Madaxweynihii hore ee maamulka Puntland islamarkaana ka mid ah xildhibaanada Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya C/raxmaan Maxamed Maxamuud (Faroole) ayaa shaaca ka qaaday kharashaadka ay bixiyeen qaar ka mid ah musharixiinta ka qeyb galeeysay doorashooyinkii ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal.
C/raxmaan Faroole oo khudbad ka jeediyay munaasabad looga hadlaayay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo sidii loogu gurman lahaa dadkii ay abaarahaasi saameeyeen ayaa sheegay in musuq maasuq baahsan ay ku kaceen qaar ka mid ah musharixiinta ka qeyb galeysay doorashada ka dhacday magaalada Garoowe.
Wuxuu C/raxmaan Faroole sheegay inuu ka war-haayo qaar ka mid ah musharixiinta u tartameeysay doorashada baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhacday magaalada Garoowe ay lacago badan ku bixiyeen, isagoona soo hadal qaaday in qof ka mid ah dadkaasi uu hal kursi ku bixiyay lacag gaaraysa hal milyan oo doolar (1,000,000), isagoona arrintaasi ku tilmaamay mid laga naxo.
Mr. Faroole ayaa dhinaca kale sheegay in shaqsiga intaas lacag bixinaayo uu doonayo inuu lacago intaasi ka badan uu codkiisa uga gato musharixiinta ku tartami doonta jegooyinka kale.
“Waxaa jira nin hal milyan oo doolar ku bixiyay doorashada, si uu ku helo kursi, marka dadka qaadanaaya lacagtaasi oo ninkaasi kursiga u dooranaya ma waxay moodayaan in ninkaasi shaqo usoo qabanayo, wuxuu shaqsigaasi hadafkiisa yahay inuu lacago kale oo ka badan ku qaato codkiisa” Sidaas waxaa yiri C/ramaan Faroole.